I-Easy Pepper Chicken Stir Fry - Ungadliwa
yini imbiza esheshayo ukukhululwa kwemvelo
indlela yokujiya isoso sikashizi
ukuthambisa kanjani amathawula ngeviniga
I-Easy Pepper Chicken Stir Fry
Pepper Inkukhu Govuza Fry iresiphi kulula ukuhlekisa ngezithako osuvele unazo ku-pantry yakho. Iyashesha, igcwele ukunambitheka futhi isebenze kahle nelayisi elithile eliphekiwe.
Hlanganisa amafriji ayindlela enhle yokwenza isidlo sakusihlwa ngoba bayashesha ukuhlangana. Inkukhu ne-Broccoli Stir Fry futhi Inkukhu yaseTeriyaki i-stir fry ezinye zezintandokazi zami!
Sijwayele ukuba namasosi ambalwa njenge-soy sauce ne-oyster sauce ngaso sonke isikhathi emaphepheni ethu ukuze izindlela zokupheka ezinjengalezi zihlangane ndawonye e-jiffy.
Ngiyazi ukuthi kungaba nzima kanjani ukucabanga ngezindlela zokupheka zedina eliyingqayizivele nsuku zonke yingakho kanye ngesikhashana, udinga iresiphi yangemuva ephaketheni ongaqhubeka ubuyela kuyo. Futhi le iresiphi yenkukhu ethokomele yenkukhu iyashesha, kulula, futhi yenziwa ngezithako ezingadingi uhambo lokuya esitolo.
Umndeni wami uhlale ukulungele ukunikeza inkukhu ithuba, kuzo zonke izimo namafomu kusuka Inkukhu Yesidala Nemfucumfucu uku Inkukhu Divan , ngakho-ke sihlala sinamabele ambalwa wenkukhu efrijini.
Ungayenza Kanjani Inkukhu Ukugovuza Fry
Le recipe iqala ngokwenza inkukhu inyakazise i-marinade ethosiwe nge-soy sauce, i-garlic egayiwe kanye nopelepele womhlabathi nokuhlanza inkukhu kuyo okungenani imizuzu eyishumi nanhlanu. Lokhu kusiza ukwakha ukunambitheka okwengeziwe enkukhu futhi kwakha isisekelo esihle sale recipe.
Isikhathi esiphelele sokupheka nokugubha yimizuzu engama-20 kuphela, futhi ungazisika zonke izithako zakho ngenkathi inkukhu isemanzini. Sifaka ujinja nogalikhi oqoshiwe, u-anyanisi osikiwe, upelepele wensimbi oluhlaza okotshani nobomvu namasosi ambalwa ukuqeda lokhu, uma inkukhu isiphekiwe. Bese uvele uphonsa yonke into ndawonye.
Sigqoka izingcezu zezinkukhu ezihlanjululwe ngesitashi sommbila ukuze sizithobe zibe mnandi ephepheni ngaphambi kokuzithosa nezinye izithako.
Lokhu kungeza ukunambitheka okuncane enkukhu futhi kusiza ukugcina ama-flavour aqinile. Inkukhu iphekwe emlilweni ophakeme ukuthola ukuseshwa okuhle, futhi njengoba lezi yizicucu zamabele ezinkukhu, zipheka ngaphansi kwemizuzu eyishumi.
Ngiyakuthanda ukusebenzisa upelepele owuhlaza okotshani nobomvu ngoba bengeza ukunambitheka okubukhali okusikisela ubumnandi kule recipe. Kepha zizwe ukhululekile ukukuhlanganisa nophuzi noma vele uhambe nokuhlukahluka okukodwa. Ungenza lokhu kube yi-broccoli yenkukhu inyakazise gazinga uma ngabe yilokho okufisayo!
Lapho yonke into isiphonswe kuleyo nkukhu emnandi elula yokuthosa isosi, uzobe uya kuyo usuka epanini uqobo. Usoso ogqoka inkukhu umnandi ngendlela eyisimanga, futhi wenziwe amangwevu athile irayisi , irayisi le-sichuan noma ngisho Ilayisi Lokholifulawa , Kwenzela idina ephelele!
KAKHULU LULA ASIAN zokupheka eziphefumulelwe!
Inkukhu Pad Thai
Inkomo elula yaseMongolia
Inkukhu Lo Mein
Amaphakethe we-Ananas Teriyaki Shrimp Foil
Inkukhu yakwaGeneral Tso’s
Le nkukhu inyakazisa gazinga ngemifino futhi yenza izinsalela ezinhle futhi empeleni ithanda kangcono njengoba isikhathi sihamba.
Pepper Inkukhu Govuza Fry
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokuphekaamashumi amabili imizuzu ishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esiphelele30 imizuzu Izinkonzo4 abantu UmbhaliURicha gupta Le iresiphi ye-Pepper Chicken Stir Fry kulula ukuhlekisa ngezithako osuvele unazo ku-pantry yakho. Iyashesha, igcwele ukunambitheka futhi isebenze kahle nelayisi elithile eliphekiwe. Phrinta Phina
▢4 inkukhu amabele uthathe izingcezu eziyi-1 intshi
▢ezimbili wezipuni khanya ngiwusoso
▢1 isipuni ugaliki igayiwe
▢1 isipuni uwoyela we-sesame othosiwe
▢1 isipuni upelepele omnyama womhlabathi
▢¼ inkomishi oyster sauce
▢ezimbili isipuni uviniga
▢½ inkomishi amanzi
▢3 wezipuni ummbila ihlukaniswe
▢3 wezipuni uwoyela wemifino ihlukaniswe
▢1 enkulu u-anyanini uthathe izingcezu eziyi-1 intshi
▢1 okulingene upelepele oluhlaza okotshani uthathe izingcezu eziyi-1 intshi
▢1 okulingene upelepele obomvu uthathe izingcezu eziyi-1 intshi
▢4 ama-clove ugaliki oqoshiwe
▢1 ucezu lwentimitha ujinja oqoshiwe
Hlanganisa zonke izithako ezibalwe ngaphansi kwe-marinade kufaka phakathi inkukhu bese ubeka eceleni okungenani imizuzu engu-15.
Hlanganisa i-oyster sauce, u-soy sauce, uviniga, upelepele omnyama, amanzi enkomishi uhhafu kanye no-isipuni esisodwa se-starch bese usibeka eceleni.
Uma inkukhu isuhambile, yiphonsa ekuseleni izipuni ezimbili zommbila.
Sishisa amafutha wezipuni ezimbili epanini elikhulu bese ufaka izingcezu zenkukhu. Ungagcwalisi ipani futhi uma ipani yakho ingenkulu ngokwanele, yenza lokhu ngamaqoqo. Pheka izingcezu zenkukhu ngokushisa okukhulu imizuzu emithathu ohlangothini ngalunye. Susa izingcezu epanini bese uzibekela eceleni.
Faka isipuni samafutha esisele epanini ngokushisa okukhulu, bese ufaka u-anyanisi nopelepele. Baphonse epanini umzuzu noma emibili baze bakhanye ngombala futhi bapheke kancane. Phonsa ujinja negalikhi bese upheka omunye umzuzu.
Faka izingcezu zezinkukhu kanye nengxube yesosi epanini. Phonsa konke kahle, bese ubila umzuzu owodwa noma emibili kuze kube yilapho isoso likhula futhi ligqoke inkukhu kahle. Khonza ushisayo ngelayisi eliphekiwe noma ngemifino eceleni.
Amakholori:460,Amakhabhohayidrethi:16g,Amaprotheni:51g,Amafutha:amashumi amabilig,Amafutha agcwalisiwe:10g,Cholesterol:144mg,I-Sodium:1670mg,Potassium:1055mg,Umucu:ezimbilig,Ushukela:3g,Uvithamini A:1110IU,Uvithamini C:68.6mg,I-calcium:33mg,Insimbi:1.7mg
Igama elingukhiyeinkukhu inyakazisa gazinga InkamboIsidlo sakusihlwa KuphekiweWase-Asia© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Buyisela le Recipe elula yokugaya ukuthosa
Ama-Recipes amaningi Ongawathanda
I-Teriyaki Shrimp Broccoli Stir Fry
I-Skillet Orange Inkukhu
I-Lemon Inkukhu I-Asparagus Yenza Ukuthosa